ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်အခြောက်ခံစက် floating ငါးအစာကျွေးစက်ခြောက်
အလွှာအရေအတွက်:5အလွှာ
စွမ်းရည်:200-300ကီလိုဂရမ် / နာရီ
ကုန်ကြမ်းများ:ရေပေါ်ငါး feed ကိုလုံးလေးများ
ထံမှနောက်ဆုံးလုံးလေးများ ငါးအစာကျွေးစက် မြင့်မားသောအစိုဓာတ်နှင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ရှိပါတယ်, ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုချက်ချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်။ သိမ်းဆည်း။ မရပါ။ ပထမ ဦး စွာအခြောက်ခံရန်မလိုအပ်ပါ. ကွက်အမျိုးအစားငါးအစာကျွေးစက်ခြောက်စက်သည်ငါးအစာထုတ်လုပ်ရာတွင်ထုတ်လုပ်သောအစာတောင့်အတောင့်များကိုအခြောက်ခံခြင်းနှင့်အပူပေးခြင်းတို့ကိုအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောတောင့်အခြောက်ခံစက်ဖြစ်သည်။. ငါးအစာခန်းခြောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည်ပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်သည့်ခါးပတ်ပေါ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်လေနှင့်ပူသောလေအားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်ထားခြင်းဖြစ်သည်. ပိုက်အမျိုးအစားရှိသောမျောပါသောငါးအစာခြောက်စက်သည်အစာကျွေးခြင်းလုံးလေးများကိုပိုက်ကွန်ဖြင့်ဖြန့်ကျက်စေသည်.
အဆိုပါပိုက်ခါးပတ်ဂီယာစက်များကဆွဲငါးအစာကျွေးခြင်းခြောက်သွေ့စက်အတွင်း၌လှုံ့ဆော်ပေး. လေထုပန်ကာမူကြမ်းရှိပါသည်, အပူ device ကို, လတ်ဆတ်သောလေထု - စုတ်ယူခြင်း - စနစ်နှင့်အိပ်ဇော - ထွက်ပေါက်စနစ်. အော်ပရေတာသည်အပူချိန်၏လွတ်လပ်သောလည်ပတ်မှု parameter ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်, စိုထိုင်းဆနှင့်အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်လည်ပတ်မှုနှုန်း, ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်အခြောက်ခံစက်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုသေချာစေသည်, နှင့်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ၏ optimization. ပိုက်အမျိုးအစားရှိသောရေပေါ်ငါးအခြောက်ခံစက်တွင်ကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးနှင့်လည်ပတ်နိုင်မှုကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်. ခြောက်သွေ့မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပြည့်အဝတံဆိပ်ခတ်ထားသောသေတ္တာထဲတွင်ပြုလုပ်သည်, ထိရောက်စွာဖုန်မှုန့်ယိုစိမ့်ခြင်းကိုရှောင်ရှား. feed dryer machine တွင် transmission device ဖြင့်ရွေ့လျားနေသော damp ပစ္စည်းများသည်ကွက်ခါးပတ်ပေါ်တွင်အညီအမျှပျံ့နှံ့သွားသည်. အောက်ခြေမှထိပ်သို့, ပိုက်ခါးပတ်မှတစ်ဆင့်ပူသောလေထုစီးဆင်းမှုနှင့်ငါးအစာလေးများ. ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌, အပူလဲလှယ်လုံလောက်ပါတယ် & ယူနီဖောင်း, အလွန်အမင်းမြင့်မားသောဖြစ်ခြင်းခြောက်သွေ့ထိရောက်မှု.
ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်အခြောက်ခံစက်တွင်လေမှုတ်စက်များပါဝင်သည်, အပူ device ကို, လတ်ဆတ်သောလေထုစုတ်ယူခြင်းနှင့်အိပ်ဇောဆေးမှုတ်. ခြောက်သွေ့မှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အ ၀ တံဆိပ်ခတ်ပြီးဆုံးသည်. feed pellets သည်ဂီယာစက်မှဆွဲသောကွက်ကြိုးပေါ်တွင်အညီအမျှပျံ့နှံ့သွားသည်. ပူသောလေသည်ထိပ်မှအောက်ဆုံးသို့ဆန့်ကျင်ဘက် ဦး တည်သည့်အထူးအစိုဓာတ်နှင့်အတူကွက်ခါးပတ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။, ထို့ကြောင့်ခြောက်သွေ့သဘောပေါက်. လေထု၏တစ်တန်းကိုဖြန့်ဝေသည်, အချို့ကုန်ဓာတ်ငွေ့ဆေးကြောသည်.
ဒီရေပေါ်ငါးအစာကျွေးစက်ခြောက်စက်များအများအပြားလွတ်လပ်သောယူနစ်ပါဝင်ပါသည်. တိုင်းယူနစ်စောင်ရေလေမှုတ်စက်၏ဖွဲ့စည်းထားသည်, အပူ device ကို, လေကောင်းလေသန့် & အိပ်ဇောဆေးထုတ်စနစ်. ထပ်ခါတလဲလဲပေါ်သည့်ကြိုးခါးပတ်ကိုသံမဏိကြိုးသို့မဟုတ်ဖောက်ထားသည့်သံမဏိပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, ဂီယာအုံများမှတဆင့်လျှပ်စစ်မော်တာမှမောင်းနှင်သည်. ပူသောလေထုအပူချိန်နှင့်စောင်ရေပမာဏကိုအသိဥာဏ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်.
ပေါ်ကိုခါးပတ်ပေါ်ရှိငါးအစာလုံးလေးများသည်လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်၍ ပူသောလေနှင့်အပူပေးသည်, အရှင်အစိုဓာတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်. ဤအစာကျွေးခန်းခြောက်စက်များအများအပြားလွတ်လပ်သောယူနစ်ပါဝင်ပါသည်. တိုင်းယူနစ်စောင်ရေပန်ကာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, အပူ device ကို, လေကောင်းလေသန့် & အိပ်ဇောဆေးထုတ်စနစ်. ပူသောလေထုအပူချိန်နှင့်စောင်ရေပမာဏကိုအသိဥာဏ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်.
ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပန်ကာရှိပါသည်, အပူ device ကို, လတ်ဆတ်သောလေထု - စုတ်ယူခြင်း - စနစ်နှင့်အိပ်ဇော - ထွက်ပေါက်စနစ်. အော်ပရေတာသည်အပူချိန်၏လွတ်လပ်သောလည်ပတ်မှု parameter ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်, စိုထိုင်းဆနှင့်အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်လည်ပတ်မှုနှုန်း, အရာငါးအစာတောင့်အခြောက်ခံ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသေချာ, နှင့်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ၏ optimization. ပိုက်အမျိုးအစားရှိသောရေပေါ်ငါးအခြောက်ခံစက်တွင်ကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးနှင့်လည်ပတ်နိုင်မှုကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်. ခြောက်သွေ့မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပြည့်အဝတံဆိပ်ခတ်ထားသောသေတ္တာထဲတွင်ပြုလုပ်သည်, ထိရောက်စွာဖုန်မှုန့်ယိုစိမ့်ခြင်းကိုရှောင်ရှား. စိုထိုင်းသောပစ္စည်းများသည်အခြောက်ခံစက်တွင်ဂီယာစက်မှရွေ့လျားရန်မောင်းနှင်သောကွက်ခါးပတ်ပေါ်တွင်အညီအမျှပျံ့နှံ့သွားသည်. အောက်ခြေမှထိပ်သို့, ပိုက်ခါးပတ်မှတစ်ဆင့်ပူသောလေထုစီးဆင်းမှုနှင့်ငါးအစာလေးများ. ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌, အပူလဲလှယ်လုံလောက်ပါတယ် & ယူနီဖောင်း, အလွန်အမင်းမြင့်မားသောဖြစ်ခြင်းခြောက်သွေ့ထိရောက်မှု.
1. ပစ္စည်းများခြောက်သွေ့နေစဉ်တုန်ခါသို့မဟုတ်ထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါကြောင့်လုံးလေးများနဂိုအတိုင်းထားရှိမည်.
2. လေထုအရေအတွက်, အပူအပူချိန်, အကောင်းဆုံးသောခြောက်သွေ့မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်အတွက်အချိန်နှင့်နို့တိုက်ကျွေးသောအစာများကိုချိန်ညှိနိုင်သည်.
3. ရေပေါ်ငါးအစာခန်းခြောက်စက်တွင်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်, လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
5. အစာကျွေးသောတောင့်များခြောက်သွေ့စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, အစေ့,စသည်တို့. ခြောက်သွေ့သောဖြစ်စဉ်ကြောင့်, ၎င်းကိုပါကပျက်စီးလွယ်ပြီးပျက်စီးလွယ်သောပစ္စည်းများကိုခြောက်ရန်မသုံးနိုင်ပါ.
6.ရေပေါ်ငါးအစာခြောက်စက်စက်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်အလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်. ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ, လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
7. ပစ္စည်းများခြောက်သွေ့နေစဉ်တုန်ခါခြင်းသို့မဟုတ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ, ဒါကြောင့်လုံးလေးများနဂိုအတိုင်းထားရှိမည်.
8. လေထုအရေအတွက်, အပူအပူချိန်, အကောင်းဆုံးသောခြောက်သွေ့မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန်အတွက်အချိန်နှင့်နို့တိုက်ကျွေးသောအစာများကိုချိန်ညှိနိုင်သည်.
9. ပူလေကြောင်းကိုမြို့ပတ်ရထားလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်, စွမ်းအင်ကိုအလွန်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏.
10. ထူးခြားသောလေကြောင်းခွဲခြားစက်, လေပူသည်တစ်ပုံစံတည်းဖြန့်ဝေစေသည်; ဒီထုတ်ကုန် '' အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ပါတယ်.
ငါးအစာကျွေးစက်ခြောက်၏ ဦး ခေါင်း
ငါးအစာခန်းခြောက်စက်၏ ဦး ခေါင်းကိုမောင်းနှင်သော roller နှစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, တင်းကြပ်စွာ, ဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်အစာကျွေး.
Passive bearing သည်တင်းမာမှုကိုခံနိုင်ပြီး mesh belt ၏တင်းကျပ်မှုကိုဆုံးဖြတ်သည်, ဒါကြောင့် passive roller ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာရှိတဲ့ bearings တွေကိုမြင့်မားတဲ့အပူချိန်နဲ့ချောဆီကိုပုံမှန်ပေးသင့်ပါတယ် (200 အထက်) အမဲဆီချော, feed ကို pellet dryer ၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုသေချာစေရန်.
တင်းသည်ကွက်ခါးပတ်တင်းကျပ်စွာညှိရန်ဖြစ်သည်. ပထမ ဦး ဆုံးတပ်ဆင်, ကွက်ခါးပတ်တင်းကျပ်ရပါမည်, နှင့်တက်အပူပြီးနောက်, နောက်တဖန်တင်းကျပ်
ဂီယာအစိတ်အပိုင်းကိုငါးအစာတောင့်ခြောက်စက်၏အဆုံးတွင်တပ်ဆင်ထားသည်. ဂီယာလျှော့စက်၏အနေအထားကိုညှိခြင်းဖြင့်ဂီယာကွင်းဆက်၏တင်းကျပ်မှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်. ဂီယာ reducer ၏အခြားဘက်ခြမ်းရှိဂီယာကို၎င်း၏သက်တမ်းတိုးရန်ချောဆီကိုလည်းထိုးပါလိမ့်မည်.
ဤအဆင့်သည်ပစ္စည်းခြောက်သွေ့ခြင်း၏အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်areaရိယာဖြစ်သည်, ထိပ်ပေါ်မှာ install လုပ်နေတာပေါက်ကွဲမှုပိုက်နှင့်ရိနာစွဲပိုက်. နှစ်ဖက်စလုံးမှအတွင်းပိုင်းအခန်း၏အောက်ဘက်သို့လေကောင်းလေ ၀ င်သည်, ထို့နောက်အလယ်ကနေလေတိုက်တာဘိုင်အားဖြင့်ထုတ်ထုတ်ယူ. လေ ၀ င်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်တွင်လေအလျင်ကိုထိန်းညှိရန်ထိန်းချုပ်သောအဆို့ရှင်များတပ်ဆင်ထားသည်.
(ကီလိုဂရမ် / နာရီ) အပူ
( kw) ကွက်